नेकपाको डुंगा : को कति पानीमा छन् ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार नेकपाको डुंगा : को कति पानीमा छन् ?
नेकपाको डुंगा : को कति पानीमा छन् ?
२०७७, १९ बैशाख शुक्रबार ०७:३७
केपी शर्मा ओली/ प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ ल्याएदेखि नै आफूलाई हेरेरै जनतालेमत दिएको अहं छ । त्यसैले उनी सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै आफ्नो योजनाअनुसार मात्र अघि बढ्न खोजे । त्यसअन्तर्गत सुरुमा उनले अध्यक्ष दाहाललाई साथमा लिन खोजे, नेपाललाई किनारामा पुर्‍याउन चाहे । जब कि पूर्वएमालेको महाधिवेशनमा पराजित भए पनि नेपालले ओलीकै हाराहारीमा मत ल्याएका थिए । सम्भवतः त्यो कुरालाई ओलीले ख्याल गरेनन् । बरु नेपाल झन्डै १५ वर्ष पार्टी महासचिव हुँदा आफू छायामा परेको कुरा उनको मनमा गढिरहेको थियो ।
Previous articleकाेराेनाले भारत पनि भयावह बन्दै : एकैदिन ७५ जनाकाे मृत्यु, संक्रमितकाे संख्या ३४ हजार नाघ्याे
Next articleअमेरिकामा मात्रै १० लाख संक्रमित